अर्का दलगत माइला छन् भनेर भन्देखुम वामदेव गौतम ! जेठो बन्ने रहर क्लाइमेक्समा पुगेको छ । तग्दिर कमजोर छ । घरै छोडे बाक्लो दाल खान तर झोल पनि भेटेनन् । प्रकाशचन्द् लोहनी पटक पटक पार्टी फोड्छन, जोड्छन जेठो हुन ! तर, माईलाको माइलै ! रामचन्द्र पौडेलपनि राष्ट्रिय माईला हुन् । चौध पटक चनाव लड्दापनि जेठो हुन् सकेनन् । बाबुराम भट्टराईले सधै माइलो बन्नुको पिंडाले पार्टी नै फोडे । हैन, माईलाहरु जेठो वा कान्छो हुन नसक्नुको खास कारणचाहिं के होला !
(हास्य कलाकार मनाेज गजुरेलकाे गजुरियल डटकमबाट ।)